मन्त्रिपरिषद बैठक सकियो, तत्काल कोही मन्त्री नहटाइने - Nepali Online News Media-shikharnews.com
मन्त्रिपरिषद बैठक सकियो, तत्काल कोही मन्त्री नहटाइने
हिजो साँझ बसेर विहानै निरन्तरता दिइएको मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएको छ । बैठकमा के के निर्णय भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा देशको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
आकस्मिक जस्तो देखिने बैठकका बारेमा पत्रकाहरुले प्रश्न गर्दा बास्कोटाले बैठक आकस्मिक नभएको जिकिर गरे । बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद बैठक जुनसुकै बेला बस्न सक्ने भन्दै आकस्मिक बैठक नभएको बताएका हुन् ।
“साँझ, बिहान मध्यरातमा पनि सक्छ चौविसै घण्टा अभाइलेबल हुनेछ ।” बास्कोटाले भने । कतिपयले मन्त्रीमण्डल नै हेरफेर गरिने हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए । तर बास्कोटाले मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकोले मन्त्रिपरिषदमा छलफल नहुने स्पष्ट पारे ।
बाँस्कोटा पत्रकारहरुले मन्त्रीमण्डल हेरफेर सम्बन्धमा अनावश्यक आशंका गरेको भन्दै असन्तुष्टी पनि देखिए । उनले भने “तपाईहरू कुहीरीमण्डलमा हुनुहुन्छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले सरुवा बढुवा र केहि विधेयकका विषयमा छलफल भएको जानकारी पनि दिए । यसअघि बैठक सुरु हुनासाथ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव विचैमा उठेर बाहिरिएका थिए ।
यादव अचानक बैठकबाट किन बाहिरिए ?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव मन्त्रिपरिषदको बैठकको बीचमै बाहिरिएपछि विभन्न आशंका उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको बेला मन्त्री यादव बैठक नसकिँदै बाहिरिएका हुन् । उनले बाहिरिँदै गर्दा अर्कै काम परेर निस्किएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
र आकस्मिक जस्तो देखिने बैठक छोडेर जानुपर्ने अर्को कुन काम पर्यो होला र भनेर धेरैले आशंका गरेका छन् । आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको र कमजोरी औँल्याउने क्रममा मन्त्री यादव पनि तारोमा परेपछि आक्रोषमा बैठक छोडेको कतिपयको अनुमान छ ।
सुरुमा मन्त्री यादवले आफू मन्त्रिपरिषद बैठकमा जाँदै नगएको बताएका थिए । तर, तपाईं गएर बीचमै बाहिरिनु भएको होइन र ? भन्ने प्रश्न गरेपछि मात्रै उनले आफू बैठकमा गएको तर धेरैबेर नबसेको स्वीकारेका थिए ।
बैठकमा कसैसँग कुनै विवाद नभएको पनि उनको दावी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ७ बजेदेखि बैठक बसेको थियो ।
आयातीत तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण फिर्ताको निर्णयले आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् ।
यसअघि सोमबार साँझ पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा मन्त्रीहरूको रिपोर्टिङ सुनेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहानको बैठकबाट यसबारे ठोस निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बिहीबार बस्दै आएको छ । बैठकका निर्णय एक सातापछि सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले आयातीत तरकारीको तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याउन निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कृषि मन्त्रालयले नाकामा कडाइ र्गयो । तर, वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षण स्थगित र्गयो । प्रयोगशाला अभावमा विषादी परीक्षण स्थगित गरिएको भनिए कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले संसद्मै प्रयोगशाला अभाव नरहेको जवाफ दिएका थिए ।